Umthandazo Wemiphefumlo Ukwenza Uthando Luphambane [+ Umthandazo Owomeleleyo]
kuqala » Imithandazo » Umthandazo wemiphefumlo ukwenza uthando luphambane
Wakha weva na ngabanamandla umthandazo wemiphefumlo ukwenza uthando luphambene? Imiphefumlo elahlekileyo inokulibaleka ngamanye amaxesha, kodwa inyaniso kukuba banamandla amakhulu ngaphakathi kwabo kwaye banokusinceda ngendlela enamandla kakhulu.
Ukwazi ukwenza umthandazo olungileyo yimfihlelo yayo yonke into.
Umthandazo olungileyo odityaniswa nokholo wenza ukuba naluphi na uthando luphambane ngenxa yakho, nokuba luzibophelele okanye alunamdla.
Kweli nqaku sijonge ukukunika umthandazo onamandla wemiphefumlo.
Akayi kukhonza kuphela ukwenza uthando luhlanya, luya kunceda ukumomotheka, ukumenza akhangele kwaye afune ukuba nobudlelwane nawe.
Umthandazo wemiphefumlo ukwenza uthando luphambene ngaba uyasebenza?
Lo mthandazo siza kuwufundisa apha ngenene uyasebenza kwaye womelele kakhulu.
Sele siyifake eminye imithandazo yokuthandazela imiphefumlo apha kwiblogi kwaye sihlala sifumana ubungqina kwabo babenzayo.
Thandaza nje usoloko ukholelwa kwaye uhlala unokholo oluninzi ngaphakathi kuwe.
Masibeke imithandazo emibini eyahlukeneyo, omnye aqhube uthando kunye nomnye ambuyise.
Khetha eyona ifanele iimfuno zakho kwaye uyithandaze namhlanje.
Lo mthandazo wemiphefumlo wokwenza uthando uphambane wanele ukwenza nayiphi na indoda ephambeneyo.
Kufuneka wazi igama lendoda ephambana kunye nomhla wayo wokuzalwa.
Thandaza lo mthandazo nangaluphi na usuku lweveki kunye nasiphi na isigaba senyanga, akunamsebenzi.
Okona kubaluleke kakhulu kukuthandaza ubuncinane iintsuku ezi-3 zilandelelana.
Owu imiphefumlo elityelweyo kwaye ayifane ikhunjulwe, sebenzisa amandla akho ukundinceda eluthandweni!
Owu miphefumlo yeminqweno ayifane ikhunjulwe, ndiyazi ukuba ngamandla akho ndiya kukwazi ukuphambanisa nawuphi na umntu...
Kodwa kufuneka ndiqhube uthando lwam luphambane!
Imiphefumlo enamandla, yenza u-So-and-so azalwe usuku lwe-X lwenyanga ye-X yonyaka u-X (ukubuyisela) uqale ukuphambana phezu kwam.
Imenza aphambane neminqweno yomzimba wam, aphambane ngokulangazelela ubukho bam kwaye aphambane ngokuthanda mna nomphefumlo wam.
Imphambanisa ngokusondeleyo kum.
Imenza andifune, uyandifuna kwaye akasakwazi ukuyithatha ade abe nam, ecaleni kwam.
Kumenza aphambane ukuba nam, ngokwasemzimbeni nangokusondeleyo, njengokuba engazange abekho.
Owu Mphefumlo! Ungamphumlisi ade angathandani nam.
Ndiyazi ukuba uza kundinceda kwaye ndiyathembisa ukuba ndiza kuliveza igama lakho nanini na ndifumana ithuba ukuze ungaphindi uphose kwelokulibala.
Ungawusasaza lo mthandazo wemiphefumlo ukwenza uthando luphambane ngalo lonke ixesha ufuna.
Isenokuba lilizwi lomlomo, ngamagqabaza okanye ngomthandazo omncinci.
Lo mthandazo usebenza kakuhle kakhulu, uthandazelwa ngabantu abaninzi.
Umthandazo wemiphefumlo ukubuyisela uthando
Kubalulekile ukuqhuba uthando oluphambeneyo ukuze luzaliswe ngumnqweno kunye nolangazelelo, kodwa kubalulekile ukuyibuyisela.
Lo mthandazo usebenza ukwenza kunye nomthandazo ongentla.
Ujonge ukubuyisela umntu ebomini bakhe, umntu owamshiya kwaye akazange abuye.
Isenokuba sisithandwa, ilungu losapho, umhlobo kwanomphathi.
Ngamathontsi okubila awaphalazwa nguYesu kuMzimba wakhe oNgcwele, ndinike isicelo sam.
Ngamandla ayo yonke imiphefumlo ephilayo elityelweyo, ndivumele ukuba isicelo sam sivunywe.
Ndiyazi ukuba ulityelwe, kodwa ndiza kuwuthandazela lo mthandazo ukuze ukhunjulwe.
Ngamandla owanikwa wena, nceda uthando lwam luze kum, lubuyele kum luphambene ngokulangazelela.
Igama lakhe nguZibani-bani, wemka akazange aphinde abuye...
Nina boMphefumlo owomeleleyo nonamandla niyayazi ukuba akulunganga ukulibala, ndicela nindincede ndibuyise uthando lwam.
Imenza amkhumbule, azele ngumnqweno wokundibona, andiwole, andibambe athandane nam.
Qinisekisa ukuba akaphumli ngokupheleleyo ade andikhangele.
Imenza angakwazi ukuphila ngaphandle kwam.
Ukuze ungaphili ngaphandle kothando lwam, ngaphandle kothando lwam nangaphandle kobukho bam.
Imiphefumlo yam ethandekayo, eyaziwa kwaye iqondwa, ukuba undenza ndifikelele kolu babalo lunamandla ndiya kuthandaza 3 Bawo wethu kwaye 3 Bulisa uMariya ngobabalo lwakho.
Ndiseza kukhanyisa intlambo emhlophe ekupheleni kwalo mthandazo, njengomnikelo kuwe, uMphefumlo othandekayo nonamandla.
ekupheleni koku Umthandazo weMiphefumlo ukwenza uthando luphambane kwaye lumenze abuye khanyisa ikhandlela elimhlophe kwaye ulivumele livutha kude kube sekupheleni.
Kwakhona thandaza 3 Bawo Wethu kwaye 3 Bulelani uMariya.
Oku kuvela imithandazo yamaKatolika kweyona miphefumlo inamandla onokuyenza.
Mthandaze ngokholo olukhulu kwaye usoloko ukholelwa ukuba yonke into iya kusebenza eluthandweni lwakho.
Umthandazo wemiphefumlo eyi-9 ebandezelekileyo yangoMvulo
Ngaba uyayazi imiphefumlo eyi-9 exhwalekileyo kwaye yalityalwa yinto yonke kunye nabantu bonke? Mhlawumbi akunjalo, kodwa banokukunceda ukuba wenze nabani na aphambene ngothando, umnqweno kunye nolangazelelo!
Kule nto kuphela kufuneka uthandaze umthandazo wakho, uhlala ulandela imiyalelo. Kukho lo mthandazo ungezantsi kwaye phakathi kwawo uyabona ukuba kuya kufuneka ubambe imela eyintombi xa uthandaza.
Sicebisa ukuba wenze le nto, isenokubonakala ilula, kodwa ndikholelwe ukuba iwanyusa kakhulu amandla omthandazo. Emva koko thandaza umthandazo olandelayo:
Unokuthandaza lo mthandazo kunye neminye emibini echazwe ngaphambilana kweli nqaku, njengoko iphumeza injongo enye.
Sikwacebisa ukuba ugcine intliziyo yakho isempilweni kwaye yomelele ngokuthandaza oku umthandazo wokuzolisa intliziyo.
Ukuba ufuna ukuya eNossa Senhora do Desterro, unokuthandaza kuye ngalo mthandazo.
UThixo abe nani.
1 Umthandazo wemiphefumlo ukwenza uthando luphambene ngaba uyasebenza?
2 Umthandazo wemiphefumlo ukwenza uthando luphambane
3 Umthandazo wemiphefumlo ukubuyisela uthando
4 Umthandazo wemiphefumlo eyi-9 ebandezelekileyo yangoMvulo
NgoJuni 23, 2018, 12: 48 am
Hi Mystic bendiyithanda imithandazo. Ndinombuzo nje omnye. iyamgezisa umfazi? okanye kwiilesbians?
Enkosi kakhulu kwaye konke okuhle kuwe.
NgoJuni 23, 2018, 1: 46 pm
Ngethamsanqa, bakhonza ukuqhubela ibhinqa eliphambeneyo, nokuba libhinqa kumfazi, kodwa ngamanye amaxesha uloyiso lwesini esifanayo alukho lula ukufikelela.
Nge-11 ka-Agasti ka-2018, 12: 19 pm
Molweni ndizowenza lomthandazo as soon as ndine results ndizobuya ndizokunika istatement yam uba siyatshata or unamandla sele endincedile ngamanye amaxesha ndiyazi bazondinceda but this time enkosi hlala no UThixo uyamanga
NgoSeptemba 21, 2018, 8: 57 pm
Ndizowenza umthandazo.. xa sele usebenza, ndiwukhuphele ndiwubeke ecaweni ukunceda umntu osweleyo, ndilayite ikhandlela.
Nge-7 kaCanzibe, 2019, 5: 27 am
Ikhandlela kufuneka likhanyise yonke imihla